စင်ကာပူရှိ ရွှေမြန်မာ တို့ စုရာ ဝေးရာ
ယနေ့ စင်ကာပူ၌ သွားလေရာ ရွှေမြန်မာများ၏ အသံ ကြားရသည် ရွှေမြန်မာများကို တွေ့ရသည်။ တစ်ခါ တစ်ရံတော့လည်း မလေးတွေ အင်ဒိုနီး ရှားတွေနဲ့ အသွင် ခြင်း ဆင်လို့ စကားပြောသံ ကြားမှ ရွှေမြန်မာ ဆိုတာသိရတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် သုံးဆယ်ခန့် က စင်ကာပူ ၌ စာရင်းဝင် အင်းဝင် အလုပ်ကိုင်နေကြသည့် ရွှေမြန်မာ အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက် မှာ လေးရာပင် မကျော်။ ရိုးရိုး လာသူရော အမျိုးမျိူး လာသူရော အားလုံးပေါင်း ပါမှ သောင်း ဂဏန်းပင် မရှိ ။ အခု အချိန်တွင် သိန်း ဂဏန်း အတော်များများ ကျော်နေပေပြီ။
ယနေ့ Peninsula Plaza
စင်ကာပူရှိ ရွှေမြန်မာများ ပင်နီစူလာ ( Peninsula ) ကို မသိ၍ မဖြစ်။ ပင်နီစူလာ သို့ရောက်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်ရောက် သွားလေသလား ထင်မှားရလောက်သည့် နေရာ ဖြစ်သည်။
စင်ကာပူတွင် Serangoon တစ်ဝိုက် ကို Little India ဟု ခေါ်သည်။ Little India သည် စင်ကာပူ၏ တစ်ခုထည်းသော နိုင်ငံ အမည်စွဲ နေရာဖြစ်သည်။ ယခုအခါ Peninsula Plaza သည် လည်း Little Myanmar ဟုခေါ်ရလောက်သည့် နေရာဖြစ်နေပေပြီ။
ယနေ့ Peninsula Plaza ၏ အပြင် မြင်ကွင်း။
Singapore Peninsula Plaza ( 2012 )
ရေကြည်ရာ မြက်နု ရာ ပြည်ပ မှာ အလုပ် လုပ်ရာ ၌ ကြည်လင် ချမ်းမြေ့ ရ သည့် အချိန် ရှိသကဲ့ သို့ ၊ စိတ်ပင်ပန်း ရသည့် အချိန်တွေလည်း ရှိပေမည်။ အလုပ် လုပ်ကိုင် ကြရာတွင် ထိုအရာ နှစ်ခု မှာ အနည်းနှင့်အများ ဒွန်တွဲနေသည့် အရာများဖြစ်ကြသည်။ ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရာ၌ အထူး သဖြင့် စင်ကာပူလို နေရာမျိုးသည် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အမြဲ နောက်က အစဉ် ( Push) တွန်းနေသည့် နေရာမျိုးဖြစ်သဖြင့် အခြားနေရာများထက် ပို၍ပင်ပန်းသည်။ စိတ် ပင်ပန်းမှုလည်း ပိုများ နိုင်ပေသည်။
စင်ကာပူ၌ အလုပ်ကြရာတွင်လည်း အသွင်အမျိုးမျိုး အလွှာအမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ ရွှေ မြန်မာ လူငယ်များ အနေနှင့် အလုပ်ရက်များအတွင်း မည်သို့ပင်ပန်းကြပါစေ၊ စိတ်ညစ် ခဲ့ကြရ ပါစေ၊ ဒေါမနသတွေ ပွားခဲ့ရပါစေ အားလပ်ရက်များတွင်မူ ထိုလူတွေအားလုံး ပင်နီစူလာမှာ စုရုံးကြပါသည်။ ပင်နီစူလာကို ရောက်ဖြစ်ကြသည်။ ပျော်ကြ ၊ ပါးကြ၊ စားကြ စားကြ သောက် ကြ နဲ့ တပျော် တပါး စုရာဝေးရာ နေရာ ပင်ဖြစ်သည်။ ပူပြင်း လှသည့် နေရောင် အောက် က အိုအေစစ် လေးလို ဖြစ်နေပေသည်။
ပင်နီစူလာ၏ အထပ်တိုင်းတွင် မြန်မာဆိုင်များရှိသည်။ ပင်နီစူလာ တစ်ခုလုံး မြန်မာ ဆိုင်တွေက အပြည့် ။ ရွှေမြန်မာတစ်ယောက် လိုအပ်တာ တစ်ခုကို နှုတ်က ရွတ်ကြည့်ပါ။ အလွန်ကတ်သီး ကတ်သတ် နိုင်သည့် ပစ္စည်းမှ လွဲလို့ ကျန်တာ အားလုံး ပင်နီစူလာမှာ ရနိုင်သည်။ မရ နိုင် ဆိုတာ မရှိ သလောက်။
ကွမ်းယာတို့ ၊ မိုးဒီ နဲ့ ကြော်ငြာ တဲ့ ထက်လင်းရင်လူး ဆေးတို့လို အသေး အဖွားက အစ၊ ငွေလွှဲ တာအလယ်၊ ဆေးခန်း နှင့် ဥပဒေ အကျိုးဆောင် အဆုံး အားလုံး ရနိုင်သည်။ မြန်မာ လဘက်ရည်ဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်၊ ဆံပင်ညှပ် ဆိုင်၊ ဓါတ်ပုံဆိုင်၊ လေယာဉ်လက်မှတ် အရောင်းဆိုင်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ဗီဇာ ၊ Stay Permit ကိစ္စ အ၀အ၀ ဆိုင်ရာ အကျိုး ဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ အ၀တ် အထည် ပြင်ဆိုင် အားလုံးရှိသည်။ အလုပ် နားရက် တစ်ရက် အတွင်း လိုခြင်တာ ၊ လုပ်ခြင်တာ အားလုံး - ဟိုပြေး ဒီပြေး.. ပြေး နေစရာမလို ပင်နီစူလာ တွင် အားလုံး ပြီး နိုင်သည်။
၁၉၈၀ တုန်းက ပင်နီစူလာ
စင်ကာပူ ရှိ မြန်မာဆိုင် များအကြောင်း ပြန်ပြောင်း ပြောရ ပါက - လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် သုံးဆယ် ခန့်က Pearl Center မှာ ကိုတင့်လွင် ရဲ့ United Three Stars နဲ့ ကိုကျော်ဇင် ရဲ့ Golden Owl သည့်အပြင် Sim Lim Tower မှာ ကိုဇော်ဝင်း ရဲ့ “ သံလွင် “ ဆိုင် ၊ ဒါဘဲ ရှိသည်။ Sim Lim Square ပင်မရှိသေး။ နောက် သီတာ သိင်္ဂီ ပေါ်လာတယ်။ ၁၉၈၆ ခု နှစ်လယ် လောက်မှ ပင်နီစူလာ အောက်ထပ်မှာ ကိုမြင့်ဝင်း ရဲ့ Asia Express ဆိုင်ကလေး စတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအချိန်က ပင်နီစူလာ ဟာ ခြောက်ကပ် နေတယ်။ ရွှေမြန်မာ ဆိုတာ ကတော့ ဝေလာ ဝေး။
၁၉၉၃ ခုနှစ်က Peninsular ။
ယခု ရွှေမြန်မာ များနှင့် စည်ကားလှသည့် Peninsula
ယခု Peninsula ၏အပြင် Coleman Street ဘက် အပိုင်း။
North Bridge ဘက် အပိုင်းရှိ Peninsula အပြင် ဘက် ။
Peninsula ၏ အလယ် နေရာ
ပင်နီစူလာ၏ အထပ်တိုင်းတွင် မြန်မာဆိုင်များရှိသည်။ မြေညီထပ်တွင် မြန်မာဆိုင် အတော် များများရှိပြီး ဒုတိယ ထပ်မှ စ၍ အထက်ထပ်များတွင် တစ်ထပ်လုံး မြန်မာ ဆိုင်ချဉ်းများသာ ဖြစ်သည်။ အခြားဆိုင်ရှိလည်း တစ်ဆိုင်စ နှစ်ဆိုင်စသာ ရှိ ကောင်းရှိပေမည်။
Peninsula အတွင်း စည်ကား သည့်နေရာ။
ပင်နီစူလာတွင်းရှိ မြန်မာ ဆိုင်များ
သည်နေ့ ပင်နီစူလာရောက် မောင်ထွန်းမင်းတစ်ယောက် သင်းချိုအေးကိုစောင့် နေသည်။ မောင်ထွန်မင်းက နီပွန်ဆေးကုမ္မဏီက ဆေးသုတ် လုပ်သား၊ သင်းချိုအေး က Regent Heights က အိမ်ထောင်မှု အကူအပံ့။ နှစ်ယောက် စလုံး တက္ကသိုလ်ပညာ တစ်ပိုင်း တစ်စ နဲ့ ရောက်လာကြသူများ ဖြစ်သည်။
မောင်ထွန်းမင်းတို့ အဖွဲ့ Regent Heights ကွန်ဒိုမှာ ဆေးသုတ်စဉ် က ခင်မင် ခဲ့ကြ သည်။ ဆေးသုတ် လုပ်သားတွေ နဲ့ ကြီးကြပ် သူအားလုံး နီး ပါးက မြန်မာနိုင်ငံ မွန်ပြည် နယ် က ဖြစ်ကြသည်။
တစ်နေ့ မောင်ထွန်းမင်းတို့ အုပ်စု ဆေးသုတ် ရန်အတွက် အမြင့်တက် ဆေးသုတ်စင် ဂွန်ဒိုလာ (Gondola ) ကို ပြင်ဆင်နေစဉ် သင်းချိုအေး က အထုတ်အပိုး တိုးလို့ တွဲလောင်း နဲ့ East Point ကဈေးဝယ် ပြန်လာသည်။ မောင်ထွန်းမင်းတို့ ဂွန်ဒိုလာ ရှေ့ ဖြတ်အသွား-
“ အမလေး အထုတ်တွေကလဲ.. လေးလိုက်တာ “ လို့ သင်းချိုအေး ငြီးလိုက်မိသည်။
သည်တွင် ဆေးသမား မောင်ထွန်းမင်းတို့က သင်းချိုအေးကို မြန်မာမှန်းသိသွား သည်။ မောင်ထွန်းမင်းတို့ ကတော့နေ့ စဉ် အုပ်စုလိုက် မြန်မာလို ပြောနေသည်မို့ သင်ချိုအေးက သူတို့အုပ်စုကို မြန်မာမှန်းသိပြီးသား။ လူပျိုလက် ၀က်မြီးဆိုသည့်စကားမှာ မောင်ထွန်းမင်း တို့အတွက်မှာတော့ လက် မဟုတ်ဘဲ ပါးစပ် ဖြစ်နေသည်။
“ လေးရင် ထားခဲ့ လေ ၊ အခန်းထဲ အထိလိုက် ပို့ပေးမယ်။”
“ ဘာပြောတယ် “
“ အော်…. ဒို့က မီးဖို အခန်းထဲ အထိ လိုက်ပို့ မယ်လို့ ပြောတာပါ ဟယ်....ညီး ကလဲ အေ…စိတ် တိုရန်ကော…။”
Regent height s ၏ အထပ် (၃၀) ရှိ ကွန်ဒို သုံးလုံးကိုဆေး သုတ် ရသည်မှာ (၆)လ ခန့် ကြာသည်။ သည်လို နဲ့ နေစဉ် တွေ့ရင်းက စလိုက် နောက်လိုက် ၊ ရေ လေးတိုက်လိုက် မုန့်လေးကျွေးလိုက် နဲ့ ကြာတော့ လည်း ခင် သွားကြသည်။ သည်ထက် ပို ကြာလာတော့ ခင်မင် သည့် ဒီဂရီ က ရေဆူမှတ်ကို ကျော်သွားသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့သည် နှစ်ယောက်စလုံး အားသည့်နေ့။ မောင်ထွန်းမင်း က သင်းချိုအေးကို City Hall MRT Station ရှေ့ က စောင့်နေသည်။ ချိန်းထားသည့် အချိန်တွင် ချိန်းထား သည့် နေရာသို့ သင်းချိုအေး ရောက်လာသည်။
အလုပ်ခွင်အတွင်း ကန်ထရိုက်တာ နေ့စဉ် စီစဉ်ပေးသည့် ထမင်းထုတ်ကို စိတ်ကုန် နေသည့် မောင်ထွန်းမင်း တစ်ယောက် မြနန္ဒာ စားသောက်ဆိုင်တွင် ငါးလေးချဉ် ၊ ငါးပိရည် ၀က်သားဟင်းတို့နှင့် ထမင်းစားသည်။ သင်းချိုအေး ကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။ အိမ်ရှင် တရုတ်ရဲ့ အီလယ်လယ် ဟင်းတွေ နဲ့ နေ့စဉ် နှစ်ပါးသွား နေရတာကို ငြီးငွေ့ လှပြီ။ ဒါကြောင့် ငါးခူ ဟင်း၊ အကြော်စုံ သုတ် ၊ ကန်စွန်းရွက် ချဉ်ရည် တို့ နဲ့ စား သည်။
သည့် နောက် သင်းချိုအေး က ရွှေအင်းဝ မှာ ရွှေပြည်နန်း သနပ်ခါး တစ်ဘူး ၊ ကွမ်းရွက်ပုံ လျှက်ဆား တစ်ဘူး ၀ယ်သည်။ မောင်ထွန်းမင်းက အသစ်ဝယ် လာတဲ့ ဘောင်းဘီရှည် ခြေထောက်ဖြတ်သည်။ ဆံပင် ငါးကျပ်ဘိုး ညှပ်သည်။ ဒါပါဘဲ ။ ၀င်ငွေ ချင့်ချိန်နေရ သူများ မို့ ဘာမှ များများ စားစား မ၀ယ်ကြ။ နောက် အချိုရည် တွေ ၀ယ်ပြီး ပင်နီစူလာ ရှေ့ ရှိ St. Andrew’s Cathedral ၀င်းအတွင်း သို့ သွား ကာ နား ကြသည်။
ပင်နီစူလာရှေ့ တွင် St. Andrew’s Cathedral ရှိသည်။ ကျယ်ပြန့်သော မျက်ခင်းပြင် သစ်ပင်ရိပ် အုံ့အုံ့ ဆိုင်းဆိုင်း တို့ နှင့် အေးချမ်း လှသည့်နေရာ လေး ဖြစ်သည်။ မြေ နေရာရှားလှသည့် စင်ကာပူမြို့ လယ်ခေါင် လိုနေရာ မျိုးတွင် အပန်း ဖြေရန် အကောင်းဆုံး နေရာဖြစ်သည်။ မည်သည့် ဘာသာ ပင်ဖြစ်စေ ဘာသာရေး အဆောက် အအုံတိုင်းသည် အေးမြခြင်း အရိပ်အာဝါသကို ပေးသည်။ သည်နေရာ တွင် ခရစ်ယံဘာသာဝင် ဟုတ်သူ ရော မဟုတ်သူပါ တစ်နေ့တာ အနားယူနိုင်ကြသည်။ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့ တာဝန် ရှိသူများကလည်း ခွင့်ပြု ထားပုံရသည်။
St. Andrew’s Cathedral, from North Bridge Road View.
St. Andrew’s Cathedral, from St. Andrew's Road View.
St. Andrew’s Cathedral ၀င်း အတွင်း ရွှေမြန်မာ များ ။
St. Andrew’s Cathedral ၀င်း အတွင်း နားနား နေနေ။
မောင်ထွန်းမင်းတို့ ကဲ့သို့ St. Andrew Cathedral ၀င်းအတွင်းမှာ နားနေသူများ၏ အများစုမှာ လူငယ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ၄င်းတို့ အိမ်မှ သယ်လာတာရော ပင်နီစူလာမှ ၀ယ် လာ တာတွေ ပါ အားလုံးကို စုပေါင်းစားသောက်ကြ စကားစမြီ ပြောကြ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကြ နှင့် အပန်းဖြေကြသည်။ အပန်းလည်း ပြေကြသည်။ လူ အားလုံးသည် သောက ဗျာပါဒ အားလုံး ကင်းခြင်မှကင်း ကြပေလိမ့်မည် သို့သော် ပင်နီစူလာသည် ရွှေမြန်မာများအား ထိုခဏ အတွင်း မှာတော့ အားလုံး သော ပူပင်မှု များ ကို ဖြေဖြောက် ပေးနိုင်ခဲ့ ပါသည်။
St. Andrew’s Cathedral ၀င်အတွင်း ပျော်ပျာ် ပါးပါး နားနား နေနေ
နေညိုချိန် ရောက်ပြီ မို့ တစ်စ တစ်စ ပြန်ကြပြီ။ သင်းချိူ အေးက အစိမ်းရောင် MRT စီးပြီး Bukit Batok ရှိရာ အနောက်ဖက် ပြန်ရမည်။ မောင်ထွန်းမင်း က Hill Street ကနေ ဘတ်စ်ကားစီးကာ အဆောင်ရှိရာ အရှေ့ဘက် ဂေလန်း ( Geylang) အရပ် သို့ ပြန်ရ မည်။ မောင်ထွန်းမင်း က သင်းချိုအေးကို City Hall MRT Station ထိပ်သို့ လိုက်ပို့ပေးသည်။
“ အကိုထွန်းမင်း အခုတစ်လော ဂွန်ဒိုလာတွေ ပြုတ်ကျ တယ်လို့ ကြားတယ်။ အမြင့် တက်ရင် သတိထားပါနော်၊”
“ အေးပါ သင်းချို ၊ ကိုယ်တို့ ဂွန်ဒိုလာတွေ က Safety Device တွေ ရော Back up တွေပါ ရှိပါတယ်။ သင်းချို လည်း ဘာအကြောင်းဘဲရှိရှိ ၊ ဘယ်အချိန်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့် ကို ဖုံးဆက်နော်။ ၂၄ နာရီ လုံး ကြိုက် တဲ့ အချိန် သာ ဆက် ၊ အားမ နာနဲ့ ။“
စိုးရိမ်မှုဆိုသည်မှာ ရင်ထဲ၌ရှိသော သမုဒယသံယောဇဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို လှစ်ဟပြသော အရာပင် ဖြစ်လေသည်။
ဒို့ တစ်တွေ နောက် အပတ် မှာ ပြန်ဆုံကြမယ် နော်။
At the Same Time and the Same Place.
သည် အချိန် ၊ သည် နေရာ Peninsular မှာ ဘဲ ပေါ. ။
Posted by Soe Hlaing at 00:15
zinyawni 29 December 2013 at 06:27
Soe Hlaing 29 December 2013 at 06:36
I am happy to here that Zinyawni.